Wadaadka Xasan Daahir Aways Oo Farriin U Soo Direy Fannaanad Reer Somaliland Ah Oo Fanka Ka Fadhiisatay, Hab-dhaqanka Hablaha Fanka-na Ka Dayriyey – somalilandtoday.com
Wadaadka Xasan Daahir Aways Oo Farriin U Soo Direy Fannaanad Reer Somaliland Ah Oo Fanka Ka Fadhiisatay, Hab-dhaqanka Hablaha Fanka-na Ka Dayriyey
(SLT-Muqdisho)-Guddoomiyihii hore ee Maxaakiimta Islaamiga ah ee Soomaaliya iyo Xisbul Islaam ahaana xubin sare oo ka tirsanaa kooxda Alshabaab ee dalkaasi Soomaaliya ka dagaalanta wakhtiganna xabsi guri ku yaalla Magaalada Muqdisho ku sugan Sheekh Xasan Daahir Aways ayaa si layaab leh uga hadlay Gabadh Fannaanad ah oo reer Somaliland oo dhawaan shaacisay in ay isaga baxday Fanka oo ay ka toobbad keentay sida ay hadalka u dhigtay isaga oo tallaabada gabadhaasi ku tilmaamay mid geesinimo oo ay jid wanaagsan ugu jeexday hablaha kale ee Fanka ku jira.
Xasan Daahir Aways oo farriin muuqaal ah isaga soo duubay guriga uu Magaalada Muqdisho ka dagan yahay ayaa waxa uu wax laga xumaado iyo dhibaato weyn ku sheegay hablaha Soomaaliyeed ee Fanka maanta ku jira oo uu ku tilmaamay nasiib darro weyn iyo dhibaato aan laga soo kaban karayn halka uu Xamda Queen ugu duceeyey in ilaahay waafajiyo wanaaggaasi ay dooratay.
Sheekh Xasan Daahir Aways oo Arrintaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Maalin dhawayd waxaan ka hadlay meesha halista ah ee Fanka iyo gabdhaha gaar ahaan maanta la marayo oo ah meel halis weyn ah. Waxa aan haddaba doonayaa in aan ka hadlo Arrin aan kula kulmay Warbaahinta oo ah gabadha fanka ka baxday ee magaceeda aan ku maqlay Xamda Queen, balse aanan aqoon u lahayn. Arrinkaasi haddii uu dad badan la fududyahay aniga aad buu iila culus yahay Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in uu ka dhigo Arrin weyn. Gabadhaasi waxa ay tidhi arrintaasi waan ka toobbad keenay. Kiiska Fanka iyo gabdhuhu halka ay ka marayaan waxa uu ahaa mid aan in badan ka murugoonayay balse gabadhaasi aadbay nooga farxisay. Sida Nabi Maxamed NNKHA noo sheegay arrintaasi waa mid uu aad Ilaahay u jecel yahay. Nabigu xadiis saxiix ah waxa uu ku sheegay in Ilaahay ku farxo marka addoonkiisu toobbad keeno. Ilaahay gabadhaasi haka aqbalo waxaanan u rajaynayaa in ay Toobbad nasiixo ah la timaaddo si Ilaahay SWT uga aqbalo. Dhammaanteen waxa la innooga baahan yahay in aan toobbad keeno oo Ilaahay u noqono. Ilaahay waa mid naxariis badan oo isaga ayaa is keen baray. Sidaa darteed si aan naxariistiisa iyo dambi dhaafkiisa u helno waa in aan toobbad keennaa”.
Sheekh Xasan Daahir Aways, wadaadka Al-shabaab ka tirsanaan jiray balse wakhtigan ka soo firdhaday oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi: “Walaalayaal waxaan si gaar ah ula hadlayaa gabdhaha. Waxaan leeyahay walaalayaalow Ilaahay u soo noqda xaaladdiina ma aha mid lagu farxo maanta. Waxyaabahaasi Fanka oo kale ahi wax ay idin tarayaan ma laha. Waa luggooyo if iyo aakhiraba ah. Kuwa naga dambeeya iyo ilmaheenana waa fasahaadinayaan sidaa darteed gabdhuhu sida ay yihiin haka soo laabtaan. Wax Fanku idiin soo kordhinayo maanta ma jirto. Haku dagmina waxa gaaladu innoo soo waariday ee ay sheegaan in ay iyagu ku hor mareen. Sida ay sheeganayaan ee ay horumarka ugu sameeyaan innagu uguma hor mari karno. Waxa fiican haddii aad ka tagtid waxa xun kuma horumaraysid. Masar iyo Turkiga iyo balaayadaasi ayay ka soo bilaabantay waxani oo waxa ay rag badani yidhaahdeen waa lagu hor marayaa laakiin maanta ayay garteen in aanay waxba ka jirin oo uu dhibaato yahay. Turkigii maanta wuu ka soo noqonayaa oo wuu iska soo daynayaa Fankaa iyo Filimadaasi iyo waxaa qudhunka ah walise Masar waxaasi qudhunka ah ayay ku sii jiraan. Walaalayaal fitnada iyo qashinkan xumaanta ah joojiya. Inantaasina Ilaahay ha waafajiyo khayrka ay sheegtay”. Ayuu yidhi sheekh Xasan Daahir Aways.